कसरी DevOps ले सफ्टवेयर विकास प्रक्रियालाई गति दिन सक्छ - Victor Mochere
by डानियल एम
डिजिटल वातावरणमा उच्च प्रदर्शन गर्ने प्रणालीहरू विकास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सफ्टवेयरको समयमै डेलिभरी तपाईंको कम्पनीको सफलताको लागि आवश्यक छ। केही सफ्टवेयर वितरण श्रृंखला अनुकूलन गर्न र व्यावसायिक नवाचार प्रोत्साहन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो नयाँ सेवाहरू र राजस्व स्रोतहरूको लागि ढोका हो। उच्च-प्रदर्शन प्रणालीहरू उत्पादन गर्न DevOps आवश्यक भएको छ। DevOps उपभोक्ताहरूले नयाँ र अवस्थित एपहरू विकास गर्न यो प्रविधि प्रयोग गर्छन्।
स्वचालित प्रणालीहरूले DevOps उपकरणहरूको आवश्यकतालाई बढावा दिँदा, उद्योगले गतिशील परिवर्तन देखेको छ। किनभने कम्पनीहरूले नयाँ सफ्टवेयर छिटो रिलीज गर्दछ, यसले ग्राहक सन्तुष्टिमा परिणाम दिन्छ। DevOps ले उत्पादन र मर्मत टोलीहरू बीचको खाडल भर्छ। DevOps ले जटिल प्रणालीहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्दछ। DevOps पूर्ण विकास प्रक्रिया सुधार गर्न परीक्षण रणनीतिहरूको संग्रह हो।
यो एक संक्षिप्त रूप हो जुन विकास कार्यहरूको लागि खडा छ र एक अलग सफ्टवेयर विकास प्रक्रिया होइन। DevOps को लक्ष्य विकास र सञ्चालनहरू बीचको सीमाहरू तोड्नु हो। सफ्टवेयरको जीवन चक्र भरि, विकासकर्ताहरू र इन-सर्भिस टोलीहरू सहकार्य गर्छन्। परीक्षण, विकास, परिनियोजन, र मर्मतसम्भार सबै DevOps दृष्टिकोणका अंश हुन्। यदि तिनीहरू विकास प्रक्रियामा छन् भने टोलीहरूले DevOps प्रणालीमा कोड साटासाट गर्न सक्छन्।
अर्कोतर्फ, स्वचालन समस्याहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। सामान्य प्रणालीमा, टोलीहरूले प्रक्रियाको अन्त्यमा कोड आदानप्रदान गर्न सक्छन्। एक DevOps वातावरण लागू गर्नाले सफ्टवेयरको द्रुत निर्माणमा मद्दत गर्नेछ। तिनीहरूको नयाँ संस्करणहरू परीक्षण र स्थापना गर्ने क्षमताको कारण, DevOps सँगको व्यवसायहरू चार गुणा बढ्छन्। ताजा अपडेटहरू र सुधारहरू पहिले भन्दा छिटो दरमा रिलीज। DevOps ले व्यवसायहरूलाई सक्षम बनाउँछ:
टोली कार्य सुधार गर्नुहोस्
कार्यहरू बाँडफाँट गर्नुहोस्
उत्पादन प्रणालीको सुरक्षा बढाउनुहोस्
नयाँ एपहरूको सिर्जनालाई अनुकूलन गर्नुहोस्
वितरण खर्च घटाउनुहोस्
सुरक्षित र भरपर्दो प्रणालीहरू उत्पादन गर्नुहोस्
यहाँ कसरी DevOps ले सफ्टवेयर विकास प्रक्रियालाई गति दिन मद्दत गर्दछ।
1. निरन्तर एकीकरण र तैनाती
2. निरन्तर पाइपलाइन सञ्चालन
3. स्वचालित प्रणालीहरू
4. सुरक्षा सुधार गर्नुहोस्
5. बजारमा छिटो समय
निरन्तर एकीकरणले त्यो परियोजनाको केन्द्रीकृत आधिकारिक कोड भण्डारमा कोड मर्ज गर्दछ। विकासकर्ताहरूले कोड प्रकाशित गरेपछि तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्छन्। निरन्तर एकीकरणको प्राथमिक उद्देश्य सफ्टवेयरको गुणस्तर सुधार गर्नु हो। निरन्तर एकीकरण प्रणालीहरूले कोडको मूल्याङ्कनलाई सरल बनाउँछ। नतिजाको रूपमा, सफ्टवेयर प्रोग्रामरहरूले अन्य कामहरूमा ध्यान दिन सक्छन्।
निरन्तर परिनियोजन एक कदम द्वारा निरन्तर एकीकरण अघि। कुनै पनि मानव सम्पर्क बिना, ग्राहकले कोड अपडेट प्राप्त गर्दछ। केवल एक असफल परीक्षणले मानव संलग्नता आवश्यक पर्ने परिनियोजनलाई निरस्त गराउनेछ। कोडहरूको वास्तविक-समय तैनातीमा स्वचालन सहायता गर्दछ। निरन्तर डिप्लोइमेन्टले उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन लाग्ने समयलाई गति दिन्छ। यसले ग्राहकहरू र विकासकर्ताहरू बीच प्रतिक्रिया पाश बढाउँछ।
विकासकर्ताहरूको काम पूरा गरेपछि रिलीजको लागि छ। विकासकर्ताहरूले वास्तविक समयमा त्यस्तो प्रतिक्रियाको जवाफ दिन सक्छन् र कुनै पनि मुद्दा रिपोर्टहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। यदि तिनीहरू नयाँ विचार परीक्षण गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूले नयाँ सुविधाहरू सुरु गर्न र पुष्टि गर्न सक्छन्। तपाईंको प्रणालीमा DevOps कम्पोनेन्ट समावेश गर्नाले तपाईंलाई नवीन सुविधाहरू ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ। यसले तपाईंको सेवासँग उनीहरूको संलग्नता बढाउनेछ।
DevOps ले IT टोलीका सबै सदस्यहरू बीच निरन्तर समूह प्रयासलाई बढावा दिन्छ। नतिजाको रूपमा, टोलीका प्रत्येक सदस्यसँग कार्यक्रममा ठूलो अन्तरदृष्टि छ। जब विकासकर्ताहरूले DevOps लाई तिनीहरूको पाइपलाइन सञ्चालनहरूमा एकीकृत गर्छन्, टोलीका सदस्यहरू बीच बलियो बन्धन विकास हुन्छ। त्यसोभए, टोलीका सदस्यहरू सम्पूर्ण विकास प्रक्रियामा एकअर्कामा भर पर्छन्। यसले विज्ञहरूलाई डेलिभरी प्रक्रियामा काम गर्न अनुमति दिन्छ।
सफ्टवेयर र हार्डवेयर अपडेटहरू निरन्तर सञ्चालनहरू मार्फत गैर-विघटनकारी तरिकामा व्यवस्थित हुन्छन्। यो यसरी गरिन्छ कि एप्लिकेसनको अघिल्लो संस्करणहरूले ग्राहकहरूलाई सेवा दिन जारी राख्छ। तिनीहरू परीक्षण र वितरण पछि नयाँ संस्करणमा अपग्रेड गरियो। कोड रिलिजको समयमा, निरन्तर सञ्चालन योजनाले सुनिश्चितताका समस्याहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ।
नवीनताको लागि, स्वचालन भविष्य हो। DevOps को सबैभन्दा प्रसिद्ध पक्षहरू मध्ये एक स्वचालन हो। DevOps ले स्वचालित विधिहरू प्रयोग गरेर अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न धेरै उपकरणहरू र विचारहरू प्रयोग गर्दछ। नतिजाको रूपमा, तपाइँका टोलीहरूले स्रोत कोडको धेरै डाउनसाइडहरूबाट बच्न सक्छन्:
DevOps को उपयोग गरेर, तपाईंले म्यानुअल गतिविधिहरूको कारणले गर्दा हुने त्रुटिहरूको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यसको मतलब तपाईले सफ्टवेयरलाई अझ सहजता र स्थिरताका साथ सिर्जना गर्न र सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। स्वचालन परीक्षण विभिन्न प्रोग्रामिङ भाषाहरूमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यो सफ्टवेयर वा उपकरणले गर्न खोजेको कुरा गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यो एक परीक्षण हो। स्वचालन परीक्षण छिटो र कुशल छ। यसको पछाडिको कारण म्यानुअल परीक्षणहरू प्रत्येक पटक कोड परिवर्तन गर्दा प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
तर स्वचालन परीक्षण हरेक पटक प्रदर्शन गर्न आवश्यक छैन। स्वचालित प्रक्रियाहरू लगातार र अनुमानित छन्। एक सफ्टवेयर स्वचालन परीक्षण उपकरणले पनि गर्नेछ। मानव इन्जिनियरहरूको अवस्था समान छैन। तिनीहरूले समय-उपभोग गर्ने म्यानुअल परीक्षण सञ्चालन गर्छन्, जसले परियोजनाको समय र खर्चमा थप्छ। मानव त्रुटि, साथै परिणामस्वरूप जोखिमहरू, स्वचालन मार्फत कम गरिन्छ।
DevOps सफ्टवेयरको सुरक्षामा मद्दत गर्दछ। DevOps ले सफ्टवेयरलाई छिटो दरमा डेलिभर गर्न अनुमति दिन्छ। यसले सुरक्षा समस्याहरूलाई प्याच प्रयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत गर्छ। उत्पादनहरू डिप्लोइ गर्दा DevOps सुरक्षा परीक्षणहरू चल्छन्। DevOps उपकरणहरूले शोषणहरू पहिचान र सही गर्दछ। यो तपाइँको अनुकूलित उत्पादनहरु र तपाइँ तैनाती कुनै पनि तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर मा लागू हुन्छ।
तपाईंले DevOps सँग कुनै पनि उपकरण वा प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्कहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं निश्चित प्लेटफर्म वा प्रदायकहरूसँग बाँधिएको हुनुहुन्न। यो सुरक्षा दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले तपाईंलाई आफ्नो आवश्यकताहरूको लागि सबैभन्दा सुरक्षित प्रविधिहरू छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। यसले सुरक्षा कमजोरीहरू घटाएर एपहरूको सुरक्षामा मद्दत गर्छ।
साइबर आक्रमणहरूबाट अपरेटिङ सिस्टमहरूको सुरक्षा तपाईंको सफ्टवेयर विकास प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण भाग हो। तपाईको अपरेटिङ सिस्टमलाई साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्न गुगल र माइक्रोसफ्टका कार्यकारीहरूले साइबर सुरक्षा कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। विकास र परिचालन टोलीहरूले आफ्नो प्रणाली सुरक्षित राख्न यसबाट लाभ उठाउन सक्छन्। यसले तपाइँको सफ्टवेयर र उपकरणहरूलाई जोखिमहरू विरुद्ध कडा बनाउनेछ।
हरेक सफ्टवेयर आज बजार छिटो पुग्न चाहन्छ। त्यहाँ पुग्नको लागि एउटा तरिका DevOps स्थापना गर्नु हो। यदि परीक्षणको क्रममा समस्या पत्ता लाग्यो भने, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न छिटो हुन्छ। DevOps प्रणालीहरूसँग बजारमा छिटो पुग्ने संयन्त्र छ। DevOps ले प्रणाली नियन्त्रकहरू बीच संयुक्त प्रयासलाई बढावा दिन प्रयास गर्दछ।
यसले नयाँ समाधानहरूको लागि छिटो समयको परिणाम दिन्छ। DevOps ले प्रत्येक अपडेटलाई बजारमा डेलिभर गर्न सम्भव बनाउँछ। एक DevOps पाइपलाइनले दक्षता बढाउँछ र टोलीको सहयोगलाई सजिलो बनाउँछ। विकासकर्ताहरूले सहज कार्यप्रवाहको साथ कम समय सीमाहरूमा छिटो समाधानहरू विकास गर्न सक्छन्। त्यसोभए, उत्पादन रिलीज अधिक कुशल र सुसंगत हुन्छ।
DevOps ले सफ्टवेयर विकास समाप्त गर्न अभ्यासहरूको सेट ल्याउँछ। यसमा विकास र परिचालन टोलीहरू सँगै काम गर्न समावेश छन्। टोलीहरूले उत्पादन र अन्य कार्यहरूमा निरन्तर एकीकरण र तैनातीको साथ काम गर्न सक्छन्। DevOps ले सफ्टवेयर विकास प्रक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ। यसले कार्यप्रवाह गतिमा उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंको उत्पादनहरू बढाउनेछ र तपाईंको ग्राहकहरूलाई फिर्ता राख्नेछ। यो सबै सम्बन्धित पक्षहरूको लागि जीत-जित स्थिति हो।
तपाईंको व्यवसाय बढाउनको लागि सानो बजेट मार्केटिङ विचारहरू